Hebei Baiyun Daily Chemical Co., LTD. dia nandray anjara tamin'ny asa soa momba ny ala tamin'ny lohataona tao amin'ny Hebei University Studies
Baiyun simika isan'andro dia nandray anjara tamin'ny foara Canton faha-129 ny 15 ka hatramin'ny 24 aprily, hotontosaina amin'ny Internet ny tsenambararin'i China Import and Export ("Canton Fair" faha-129). Mpampiratiana efa ho 26000, fampirantiana 2.7 tapitrisa mahery ary mpividy avy amin'ny kaontinanta 5 no handray anjara amin'ny foara. Hebei Baiyun Dail ...
Maharikoriko ve ny fandroana? Ahoana ny fomba fanadiovana ny manam-pahaizana momba ny fandroana
Ah, ny mieritreritra ny hilentika ao anaty fandroana manjelanjelatra fotsiny dia mampitony antsika. Ny labozia manazava, mitendry mozika mampitony, ary miditra amin'ny fandroana manjelanjelatra miaraka amina boky na divay misy vera dia fomban'ny olona mikarakara tena manokana. Fa maharikoriko tokoa ve ny fandroana? Eritrereto izany: milomano ao anaty ...
Iza amin'ireo no tianao kokoa? Manasa ranoka sa manadio vovoka?
Ny fanasana ranon-javatra dia tsara kokoa, ny herin'ny fanadiovana dia matanjaka kokoa, lafo vidy kokoa. 1. Ny ranona fanasana dia mazàna indrindra amin'ny surfactant tsy ionic, izay manana fahaizan'ny decontamination matanjaka, ary afaka miditra lalina ao anaty ny fibresan'ny akanjo hahatratra ny fandotoana tanteraka. Ny washi ...
Ny majika an'ny detergent
Tsy vahiny ny detergent, tsy maninona manasa lovia na legioma sy voankazo, tsy ilaina ny detergent. Fa misy tombony tsy ampoizina ihany koa. 1 、 Afaka manala ny zavona amin'ny vera sy fitaratra izy io. Rehefa avy nandro, ny zavona amin'ny fitaratra ao amin'ny fandroana ary ny zavona amin'ny rano amin'ny wi ...
Mbola azo ampiasaina ve ny savony fanasan-jaza rehefa avy lany daty
Satria marefo ny hoditry ny zaza, dia tokony hifantoka amin'ireo zavatra mikasika ny hoditry ny zazakely ianao, toy ny akanjo. Ka ny akanjo an-jaza matetika dia mampiasa savony fanasan-jaza, dia tsara kokoa, satria raha ampitahaina amin'ny savony fanasan-damba ankapobeny, dia kely kokoa ny fahavoazana ho an'ny zaza, ka vao mainka popula ...
Fantatrao ve ny mahasamihafa ny detergent fanasan-damba sy ny savony savony?
Ny singa mavitrika amin'ny detergent fanasan-damba dia ny surfactant tsy ionic indrindra, ary ny firafiny dia misy ny faran'ny rano-mando sy ny faran'ny solika, izay ampifangaroina amin'ny fofon-diloilo miaraka amin'ny tasy, ary avy eo dia manasaraka ny tasy sy ny lamba amin'ny alàlan'ny fivezivezena ara-batana. ny fotoana, ny surfactants dia mampihena ny fihenan'ny rano, ka ...
savony misy savony ao anaty fiaranao dia afaka mitondra soa be dia be
Ny savony amin'ny fiainantsika andavanandro dia zavatra ilaina andavanandro tena mahazatra, azo vidiana amin'ny fivarotana lehibe rehetra, raha apetrakao ao anaty fiara izany dia misy tombony maro. Voalohany indrindra, amin'ny andro orana, esory ny savony voaomana hamaha ny olan'ny zavona eo amin'ny fitaratra aoriana, ny fomba manokana dia ny manisy savony amin'ny volo ...
Nahoana ny fiarovana amin'ny savony sy rano no miaro antsika amin'ny aretina COVID-19?
Raha ny filazan'ny World Health Organization (WHO) sy ireo masoivoho maro hafa ary ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana, ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny COVID-19 dia ny fiantohana ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano amin'ny fotoana rehetra. Na dia voaporofo aza ny fampiasana savony sy rano tsara miasa imbetsaka, ahoana no fomba fiasa ao amin'ny ...